Posted by တန်ခူး at 4:25 PM
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ..ဒေါ်တန်ခူးရေ။ အဖြစ်အပျက် နဲ့ အရေးအသား နှစ်မျိုးစလုံးထဲ နစ်မျောသွားတယ်။
မောင် နဲ့ ထား တို့မိသးစုလေး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေကြောင်း။
အမ.. ကြောက်စရာပဲ။ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။
အချစ်က တကယ်တော့ လူတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပီး အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုကြတာပါ။ မြတ်နိုးအဒေါ်လဲ အဲလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ.. သေသွားခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာ။ မြတ်နိုးတို့ ကူလူကြီးတွေပြောလို့ ကြားပဲကြားဘူ်းတာ။
တန်ခူးရေ….ကျနော်က တောင်တောင်အီအီတွေ လျှောက်စဉ်းစားတတ်တော့ တန်ခူးရဲ့ ရည်ရွယ်ရင်း ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေမယ့် ကျနော့်ဘာသာ နိမိတ်ပုံယူလို့ လိုရာဆွဲတွေးသွားပါတယ်။
“ထား” နေရာမှာ မြန်မာပြည်သူတွေ….
မွေးစားအကို “ကိုကို” နေရာမှာ နအဖ (သို့မဟုတ်) မြန်မာ့တပ်မတော်….
“မောင်” နေရာမှာ ဒီမိုကရေစီ (သို့မဟုတ်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အရပ်သားအစိုးရ…..
ထားက မောင့်ကို ချစ်တယ်။ မောင်နဲ့ဘဲ ပေါင်းသင်းချင်တယ်။ ကိုကို့ကိုတော့ သူရဲ့ နေရာမှန် အကိုနေရာမှာ အကိုလိုဘဲ ချစ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုကိုက မရဘူး။ မောင်နဲ့ မချစ်ရဘူးတဲ့။ ကိုကိုကဘဲ ထားကို ဇွတ်အတင်းချစ်ချင်နေတယ်။ ထားက ပြန်မချစ်တော့ ကိုကိုက ဓားနဲ့ခုတ်။
တော်ပါသေးရဲ့။ ထားက မသေဘဲ ကိုကိုဘဲ ထိုက်ထိုက်တန်တန် သေပြီး ဇာတ်သိမ်းသွားလို့။ ဒါတောင်မှ ထားမျက်နှာမှာရော၊ စိတ်မှာပါ အမာရွတ်ကြီး ကျန်ခဲ့တယ်နော်။
ဘာဘဲပြောပြော ဇာတ်သိမ်းလေးက ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် အချစ်ဟာ ဖြေရှင်းမရတဲ့ ပုစ္ဆာ...အချစ်ဟာ အဖြေရှာ မရတဲ့ ပြဿနာ...
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အချစ်ဟာ ဘာလဲ မသိတော့ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာနဲ့ဆုံဆည်းလိုက်ချင်လဲ...
တစ်ခါတစ်ရံတော့ အချစ်နဲ့ ဝေးချင်တယ်။
ကောင်းလိုက်တာဗျာ ... သေချာ ရေးထားတာ ...
အချစ်ကို ပြန်စဉ်းစား ဖြစ်သွားတာပေါ့ တစ်ခါတစ်ခါ ချစ်တာချစ်နေတာ မစဉ်းစားမိဘူး ... :)
ချစ်မိသွားရင် ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတာ သဘာဝပေါ့နော်..
ချစ်မိသွားတာကို တားလို့မရရင်တောင်မှ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အချစ်မျိုးတွေအတွက် ဘယ်လို သဘောထားသွားနိုင်မလဲဆိုတာ အရေးကြီးမယ်.. တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ ချစ်သူကို ကောင်းရာကောင်းကျိုး ဖြစ်စေချင်တာ မဟုတ်ဘူးလား...
ဓါးကြီးနဲ့လုပ်ရက်တယ်နော်... ကြောက်စရာကြီး .. ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့ ကိုယ်ကချစ်ရသူတစ်ယောက်ကိုတော့ ဇတ်လမ်းထဲက ကိုကိုလိုမျိုး မလုပ်ရက်ပါဘူး။ ချစ်သူဖြစ်ပြီးမှ သစ္စာဖောက်သွားရင်တော့ ဓါးနဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ရမှာပေါ့ :P ။ မောင့်ရဲ့အချစ်ကတော့ တကယ်စစ်မှန်အေးမြသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါပဲ ။ ဇတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ခုအတွက် ကျေးဇူးမမရေ :)
အမြဲအားပေးတာ ကျေးဇူးပါထနောင်းရေ။ ထနောင်းဆုတောင်းလေးကို ပြောပြလိုက်မယ်။
ကိုစိုးထက်ရေ...ကျေးဇူးပါ။ မစဉ်းစားမိအောင်ချစ်တယ်ဆိုတော့ အတော်ချစ်တာပေါ့။
သေချာတာပေါ့ပန်ရယ်။ တကယ့်မေတ္တာစစ်မှာ စေတနာလေးကတွဲပါတာပေါ့နော်။
လင်းလက်ရေ။ တကယ်တော့ ကိုကိုဟာ စဉ်းစားချင့်ချိန်မှူတွေ ပျောက်သွားအောင်ရူးသွပ်သွားတာတဲ့ လူတယောက်ပါ။ လာလည်တာကျေးဇူးပါ။
ကိုကို့နေရာက ၀င်စဉ်းစားပေးမယ်ဗျာ။ သူက ဒီဇာတ်မှာ ခုတော့ လူကြမ်းပေါ့ ။
ကျနော်တို့ သေချာမသိရတဲ့ ဇာတ်လမ်းဆိုတော့ လိုရာဆွဲတွေးတယ်ပြောပါဗျာ။
သူက ဘယ်လောက်မျှော်လင့်ပြီး ချစ်ခဲ့လဲ မြတ်နိုးခဲ့လဲ အဲဒါအရေးကြီးတယ်လေ။
ပြီးတော့ ကောင်မလေးအတွက် သူ့ဘ၀ကို သူဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့လဲ ။
မျှောင်လင့်ချက်အကြီးကြီး နဲ့ သေချာပြင်ဆင်ခဲ့မယ်ဆိုတာတော့ ယုံမှားဖွယ်ရှိမယ်မထင်ဘူး
ဟိုက ခုမှဖြစ်လာတဲ့ တစိမ်းကြီးကိုဗျာ။ တကယ်ချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်မှာ ဘယ်လောက်အထိ ခံစားရမလဲ ။
ကျနော်တိုတွေတောင် ကိုယ့်ညီမ၊ ကိုယ့်သမီးဆိုရင် တွေးပူကြသေးတာပဲ မဟုတ်လား။
ပြီးတော့ ကောင်မလေးက စိတ်ချမ်းသာတာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။အဲဒါတွေက ဘယ်လောက်အထိ ကြာကြာခံမှာတဲ့လဲ။
သူအမြတ်တနိုးထားခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးအတွက် ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ များ ရတက်အေးနိုင်ပါ့မလဲ။ ဒါတွေက အချိန်ကာလ ကပဲ အဖြေပေးနိုင်မှာလေ။
အဲဒီကြားကာလမှာ သူဘယ်လောက်ခံစားနေရမလဲ ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ ကောင်မလေးကို သူဖွင့်ပြောတာနောက်ကျလို့ ပြောရင်ရပါတယ်။
သူသာစောခဲ့ရင် ကောင်မလေးက နားလည်ပေးခဲ့သင့်တယ်။ ပြီးတော့ သူမချစ်တယ်ဆိုတာကရော သေချာလို့လား။
များသောအားဖြင့်တော့ လူတွေက အချစ်ရယ် ၊ အကြိုက်ရယ် ရင်ခုန်တာရယ်ကို သေချာမသိပဲ အချစ်တစ်ခုထဲမှာ ခေါင်းစဉ်ရောထွေးပြီး တပ်ကြတာများတယ်လေ။
ပြီးတော့ သူတို့ကြားမှာသံယောဇဉ်တွေရှိခဲ့တာပဲ ။ အနဲဆုံးတော့ သနားခဲ့သင့်တယ်လို့ ကျနော်တော့ထင်ပါတယ် ။
ကိုကိုဆိုတာနဲ့နေရင်ရော သူမက မပျော်တော့ဘူးတဲ့လား ။ ကိုယ်အရမ်းမြတ်နိူးရတဲ့သူရယ်၊ နောက်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရယ်ကို သတ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ လွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
သူ့ရင်ထဲက အပူစကို ကျနော်တို့ မြင်ကြည့်ပေးသင့်တယ်။ ဘယ်လောက်ဆောက်တည်ရာမဲ့နေမလဲဗျာ ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ။ဒီဇာတ်မှာ ကိုကို က ရူးနေသလိုပဲ ။ စကတည်းက သုကမှားနေတယ် ။
သွေးမတော်သားမစပ်ဗျာ ။ အဲဒါကတော့ မူမမှန်ဘူး ။ ထားပါ လူကြမ်းဖြစ်အောင် တင်ထားခဲ့တဲ့ ခြေဆင်းလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ ။
မောင် ဆိုတာကလည်း သာမန်လောက်ချစ်တာဆိုရင်တော့ သူနောက်ဆုတ်ပေးသင့်တယ် ။
ယောက်ကျားဆိုတော့ နောက်ဆုတ်မပေးဘူးဘာညာ မာနတွေ ရှိရင်တောင် မထားသင့်ဘူး ထင်တာပဲဗျာ။
စာနာပေးတယ်ပြောပြော ၊ စွန့်လွှတ်သူသာ တကယ်နိုင်တာပဲဆိုဆို ပေါ့ ဗျာ ။
အင်းဗျာ ။ ကျနော်ကလည်း ဦးချစ်ဦးညိုလိုမတော်တော့ ပြောချင်သလောက်ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ။
အင်း အချစ်ဆိုတာကတော့ ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ ပုစ်ဆာပါပဲဗျာ။ ကိုယ်မြင်တဲ့ ဒေါင့်က ကိုကြည့်ပြီးပြောကြတာပါပဲ ။
ချစ်သူတိုင်း ချစ်ကြသူတိုင်း အဆင်ပြေကြပါစေလို ဆုတောင်းရုံကလွဲလို့ ကျနော်တို့ ဘာများ ရော တတ်နိုင်ကြလို့လဲဗျာ ။
ကိုတာတူးရေ...ကိုကို့နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မောင့်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထားနေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်စွာခံစားလို့ရခြင်းကပဲ စာဖတ်ခြင်းရဲ့ အရသာတမျိုးဖြစ်မလားပဲနော်။ ခုလို စိတ်ဝင်တစားအားပေးတာကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ နောက်လဲ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။